Loginbanye-nbanye - Ndị na-emepụta nde
Ọ bụghị otu? debanye aha Chefuru okwuntughe?
I kwenyere na ị nabatara Usoro anyị na Ọnọdụ maka ịdebanye mgbasa ozi a.
Nwere akaụntụ? banye Chefuru okwuntughe?